एक कपकै १२ लाख पर्ने चिया ! - टि. एल. एन पोस्ट
Home अनौठो कुरा एक कपकै १२ लाख पर्ने चिया !
एक कप चियाको मुल्य कति पर्ला ? १० रुपैयाँदेखि बढीमा २ सयसम्म पर्न सक्छ । स्थान र गुणस्तर अनुसार चियाको मुल्य फरक फरक हुन्छ । तर विश्वको सबैभन्दा महंगो चियाको बारेमा सुन्नु भएको छ ? जसको मुल्य लाखौं पर्दछ भन्दा पत्याउनु हुन्छ ?
नेपालमा चियाका पारखिको कमी छैन । प्रायजसो सबै मानिस चिया पिउने गर्दछन् । अझ कतिपयको त बिहानीको शुरुवात नै चियाको घुट्कीबाट शुरु हुन्छ । तर विश्वको सबैभन्दा महंगो चिया ‘द होंग पाओ’ चाहिँ दैनिक पिउन सम्भव नहोला । किनभने यसको मुल्य लाखौँ पर्दछ ।
‘द होंग पाओ’ नामक चियाको मुल्य सुनको मुल्य भन्दा कैयौं गुणा बढी छ । चीनको एक सानो शहर, फुजियानको वूइसन क्षेत्रमा पाइने ‘द होंग पाओ’ चिया स्वास्थ्यकालागि अत्यन्त लाभकारी मानिन्छ । विशेष बिरुवाबाट तयार हुने यस चियालाई जीवनदायनी मानिएकै कारणले यो सुन भन्दा मुल्यवान मानिएको हो । यस चियाको एक घुट्कीका लागि करीब १२ लाख तिर्नु पर्दछ ।
सन् २००२ मा एक धनी व्यवसायीले २० ग्राम मात्रा खरीद गर्न २८ हजार डलर तिरेका थिए । अहिले यसको एक ग्रामको मुल्य मात्र १४ सय डलर पर्दछ । अझ एक प्यालामा यसलाई पिउने भए १० हजार डलर भन्दा बढि पर्ने गर्दछ । जसको नेपाली रुपैयाँ करिब १२ लाख पर्दछ ।
‘द होंग पाओ’ चिया यति धेरै महंगो हुनुमा यो चिया बन्ने बिरुवा हो । किनभने यो जुन बिरुवाबाट बन्दछ सो बिरुवा अब संसारमा लगभग पाइँदैन । यस्तोमा प्राचीन चिया संग्रहित गरी राखेकोले यसको मुल्य लाखौं परेको हो । यो चिया बन्ने बिरुवा सन् २००५ मा समाप्त भएको बताइन्छ ।
Previous articleम्याद सकिएको एटीएमबाट यसरी निकालियाे ३४ लाख, २ जना पक्राउ
Next articleआजको मौसम : आज कहाँ-कहाँ पर्छ पानी ?
TLN Post - September 14, 2021 0
सन्सारमा अनौठा घटना भै रहन्छन् । त्यस्तै एक अनौठो खबर बाहिर आएको छ । हामीले मानिसको मृत्यु हुँदा आफन्त र परिवारजनले दिवंगत आत्माको शान्तिको...
मेक्सिकोस्थित क्विनटाना रोका प्रहरीले एउटा निकै अचम्मको उजुरी पाएका छन् । त्यहाँकी एक महिलाले आफ्नी २३ वर्षीया छिमेकीमाथि देखिने गरी भित्री वस्त्र सुकाएकोमा आपत्ति...
भनिन्छ शान्तिको निद्रासहित सुत्नुपनि कुनै बरदानभन्दा कम होइन । हाम्रो शरीरलाई खानपान, व्यायाम तथा अन्य कामहरु जतिधेरै आवश्यक छन् उति नै आवश्यक आराम अर्थात्...
एजेन्सी, १५ भदौ । चोरी, डकैती जस्ता अपराधिक मुद्दामा प्रहरीले मानिसहरुलाई जेलमा थुनेको त सुनैकै कुरा हो तर, आज हामीले प्रहरीको हिरासतमा रहेको कुखुराको...
सगरमाथाको उचाइ बढेपछि प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई ।